China Agarose fekitori uye vagadziri | HQG
Agarose ipuraneti ine mitsara ine chimiro chakakosha itani refu yekuchinjanisa 1, 3-yakabatana β-D-galactose uye 1, 4-yakabatana 3, 6-anhydro-α-L-galactose. Agarose inowanzo nyungudika mumvura painopisa kusvika pamusoro pe 90 ℃, uye inogadzira yakanaka semi-solid gel kana tembiricha ichidonha kusvika 35-40 ℃, chinova chinhu chikuru uye hwaro hwekushandisa kwakawanda. Iko hunhu hweagarose gel inowanzo kuratidzwa maererano nesimba rejeli. Iyo yakakwirira simba, zvirinani kuita kwejelisi.
Pure agarose inowanzo shandiswa mu biochemistry rabhoritari se semi-yakasimba rutsigiro mu electrophoresis, chromatography uye mamwe matekinoroji ekuparadzanisa uye kuongororwa kwe biomolecule kana madiki mamorekuru.
Agar-gel electrophoresis inowanzo shandiswa kupatsanura uye kuona nucleic acids, senge kuzivikanwa kweDNA, kudzivirirwa kweDNA nuclease kugadzirira mepu zvichingodaro. Nekuda kwekushanda kwayo kuri nyore, zvishandiso zvakapusa, saizi diki yemuenzaniso uye resolution yepamusoro, iyi nzira yave imwe yedzinowanzo shandiswa nzira dzekuyedza mukutsvagisa kwemajini.
Gel simba: ≥1200g / cm² （1.0% gel）
Kupisa kwekushisa: 36.5 ± 1 ℃ （1.5 gel）
Tembiricha inonyunguduka: 88.0 ± 1 ℃ （1.5 gel）
Pashure: Doro Kujekesa Mumiriri
Zvadaro: Bhakteriological Agar